एसईई परीक्षामा विद्यालय उत्कृष्ठ बनाउने यस्तोपनि रणनीति …? – ebaglung.com
एसईई परीक्षामा विद्यालय उत्कृष्ठ बनाउने यस्तोपनि रणनीति …?
२०७४ चैत्र १०, शनिबार ०८:२७	Top News, थप समाचार
महेन्द्र जिसी पर्वत २०७४ चैत १० । मोदी गाउँपालिका ६ तिलाहारको नवजागृती मावि जिल्लाकै नमुना विद्यालय हो । चालु शैक्षिक शत्रको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा ८० जना विद्यार्थी सहभागि गराएको विद्यालयले विद्यार्थीहरुको सिम्वोल नब्बर अनुसार अल्फावेटीकल परिवर्तन गराएर जिल्ला कै नमुना बनेको हो । अन्य विद्यालयमा विद्यार्थीको नामको पहिलो अक्षरलाई अल्फावेटीकल मानेर परीक्षाको सिटप्लान गरिएको हुन्छ तर नव जागृती मावि त्यस्तो विद्यालय हो जसको तीन वटा अल्फवेटीकल अक्षर रहेका छन । सिम्बोल न ०७४५३००२०४७ सम्म अंग्रेजी अक्षर ए बाट टी सम्म अल्फावेट मिलाइएको छ भने सिम्बोल न ०७४५३००२०४ मा आएर पुन ए बाट नाम गरेर विद्यार्थीको अल्फावेट शुरु गरीएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलेका अनुसार विद्यालयका सबै विद्यार्थीको नाम अनुसार अल्फलवेट मिलाएर परीक्षामा समावेश गराउने प्राबधान रहेको छ । प्राबधान नै नाघेर विद्यालयले विध्यार्थी टिना पुन पछि पुन अंग्रेजी अक्षरको ए बाट अमृत रेग्मीलाई परीक्षामा सहभागि गराएको हो । केन्द्राध्यक्ष भुपेन्द्र चापागाईले कन्द्रमा ६ विद्यालयको सभागिता रहेकोमा नवजागृती माविको मात्र विद्यार्थीको अल्फावेटीकल अडर नमिलेको बताए।
यसको जिम्मेवार विद्यालय स्वयं हुनु पर्ने चापागाईको भनाई छ । आफुले जसरी विद्यालय र शिक्षा कार्यालय मार्फत सर्वेक्षण भएको लेजर अनुसार परीक्षार्थीहरुलाई परीक्षामा सहभागी गराएको चापागाईले बताए । शिवालय क केन्द्रमा जिल्लाका ६ विद्यालयका २ सय ६८ विद्यार्थी सहभागि गराइएको भएपनि नवजागृतीको मात्र क्रम नमिलेको पाइएको हो ।
यता विद्यालयले भने आफुकहा तीन प्रकारका विद्यार्थी अध्ययन गरीरहेका कारण सिम्बोल नम्बर अनुसार अल्फावेटीकल अडर नमिलाएको बताएको छ । तीन वटै अल्फावेटीकलमा विद्यार्थीहरुलाई परीक्षामा सहभागि गारएको प्रध्यानाध्यापक विष्णु सुवेदीले जानकारी दिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय पर्वतले भने अलफावेटीकल अडर क्रमागत नहुनु नियम संगत नभएको बतायो । कार्यालयका परीक्षा शाखा प्रमुख झक प्रासद गौतमले विद्यायालय र केन्द्राध्यक्षको कमजोरीले यस्तो हुन पुगेको बताउँदै आगामी दिनका परीक्षा सुधारेर लैजाने बताए । परीक्षामा सहभागि विद्यार्थी र अन्य विद्यालयका शिक्षकहरुले विद्यालय उत्कृष्ठ बनाउने रण नीति अनुसार यस्तो गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
आजको तस्वीर : यसरी बढ्दै छ ग्रामिण मोटरबाटाहरुमा दुर्घटनाको जोखिम !